Vita Brevis - IMISEBENZI EYENZIWAYO
IVita Brevis Language yisikhungo solimi esigxile ekuhunyushweni, ekufundweni kukhonjiswe amaphutha asembhalweni, ekuhlelweni nasekubhalweni kwemikhangiso kwazo zonke izilimi ezinkulu zaseYuropu, e-Afrika nase-Eshiya. Inkampani yethu iyazigqaja ngokunikeza umsebenzi owenziwe ngobunyoninco, ngeqembu labahumushi nabahleli abangama-300 abasetshenziswa njalo abaneminyaka yolwazi emikhakheni eyahlukahlukene, ibe iqinisekisa amanani ezindleko amahle kakhulu. KwaVita Brevis Language konke kumayelana nesimo esihle sokwenza izinto, ukugcinwa kwemfihlo, ukubuyiswa ngokushesha kanye nokuthi imali oyikhokhayo ikusebenzele ngokukugculisayo.
IVita Brevis Language inabahumushi abangochwepheshe emkhakheni ngamunye wobuchwepheshe, futhi iqembu lethu lezazi liyakwazi ukuzenza zonke izidingo zakho, okungaba yiwebsite noma umbiko wonyaka, umbhalo wezomthetho noma umbhalo wezesayensi. Kusetshenziswa imigomo enqala yokukhetha ukuqiniseka ukuthi bonke abahumushi bethu banikeza umsebenzi osezingeni elihle ngendlela engaguquki. Akukhona kuphela ukuthi bonke abahumushi bethu baluncela ebeleni ulimi babuye bayolufundela, kepha bonke ochwepheshe bethu kwezolimi baneminyaka besebenza emkhakheni wezokuhumusha. Iprojekthi ngayinye yabelwa umhumushi oyedwa ukuqinisekisa ukuthi kungabi nanguquko kumatemu nasesitayeleni sokuhunyushwa. Uma kukhulunywa ngokuhumusha okudinga ubuchwepheshe obuthile, sisebenzisa kuphela izazi zolimi ezinikezwe igunya ngokwemithetho ethile ezinobuchwepheshe emkhakheni ofanele.
Ukufundwa kukhonjiswe amaphutha asembhalweni
IVita Brevis Language yenza umsebenzi omuhle kakhulu ekufundweni kukhonjiswe amaphutha asembhalweni kumakhasimende afisa ukuthi kufundwe imibhalo esilungiselelwe ukushicilelwa ngaphambi kokuphrintwa kokugcina. Abantu bethu abanamakhono abenza umsebenzi wokufunda bakhombe amaphutha asembhalweni bazoqinisekisa ukuthi noma yimaphi amaphutha angahle abe aputshuke angena ngenkathi kuhlelwa umumo wombhalo azolungiswa kusenesikhathi.
IVita Brevis Language yenzela amakhasimende anemibhalo ebhalwe ngochwepheshe abanolwazi olukhethekile ngezihloko zabo abazidingidayo, kepha abangahle bangabi ngababhali abejwayele, umsebenzi wokuhlela omuhle ngokweqile. Abahleli bethu bangalulungisa ulimi ngokwemithetho yohlelo lolimi kanye nangokusetshenziswa kwalo ngendlela eyiyo banikeze imibhalo isimo esikhombisa ubunyoninco.
IVita Brevis Language ibuye yenze umsebenzi wokubhalwa kwemikhangiso ezilimini ezithile. Lapho benikezwe imiyalo ebanzi noma ikhophi ebhalelwe ukubuye ilungiswe, ababhali bethu abanamakhono bangabhala noma baphinde babhale imibhalo ngolimi nangesitayela esizifanele kahle kakhulu izidingo zamakhasimende ethu.
KwaVita Brevis siyazi ngokuphelele ukuthi eminye yemibhalo ingeyohlobo oluzwelayo futhi nezivumelwano zokugcinwa kwemfihlo zingenziwa lapho zicelwa.